६४ MP क्यामरा, ६००० mAh व्याट्री तथा १६.२१ से.मि सुपर डिस्प्लेको साथ सामसङ M31 नेपाली बजारमा - प्रबिधी खबर
नेपालको सबैभन्दा ठूलो कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स तथा स्मार्टफोन ब्राण्ड सामसङले हालै Galaxy M31 स्मार्टफोन आफ्ना युवा एवं जेन जी ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी नेपाली बजारमा पनि प्रस्तुत गरेको छ ।
यो फोन Galaxy M को थप नयाँ शृंखला हो । यस शृंखला अन्तर्गत सामसङले विभिन्न ५ मोडेलहरु प्रस्तुत गरिसकेको छ । सामसङको M शृंखला अन्तर्गत Galaxy M10, M20, M30, M40, M30s रहेका छन् । सन् २०१९ सामसङको #MegaMonster ह्यास ट्याग अन्तर्गत Galaxy M31 मा ६४ मेगापिक्सलको क्वाड क्यामरा रहेको छ, साथै ६००० mAH को व्याट्री तथा सामसङको आफ्नै Super AMOLED डिस्प्ले पनि विद्यमान रहेको छ ।
६४ मेगापिक्सलको क्यामराले अत्यन्त शूक्ष्म, विस्तृत एवं अद्वितीय फोटो खिच्ने सामथ्र्य प्रदान गर्दछ । १२३ डिग्रीको फिल्ड अफ भ्युका साथ ८ मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्सले मानव आँखाले जस्तो देख्दछ त्यस्तै क्यामराले कैद गर्न सक्दछ । साथै क्लोजप फोटो खिच्नको लागि यसमा ५ मेगापिक्सलको माइक्रो लेन्स राखिएको छ । साथै ५ मेगापिक्सलको डेफ्ट लेन्सले लाइभ फोटो खिच्न सक्दछ ।
Galaxy M31 ले द्धप भिडियो रेकर्डिङ्ग, हाइपरल्याप्स, स्लोमो तथा सुपर स्टेडि मोडमा भिडियो खिच्न सक्दछ । यसका साथै यसमा भएको नाइट मोडले अँध्यारोमा पनि उत्कृष्ट फोटो एवं भिडियो खिच्न मद्दत गर्दछ । यसको ३२ मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामरामा पनि द्धप भिडियो रेकर्डिङ्ग तथा स्लोमो सेल्फी सुविधा रहेको छ ।
Galaxy M31 मा कम्पनीको अग्रणी ६००० mAH ब्याट्री राखिएको छ, जसले सहजै पूरै दिन रात मज्जाले फोन चलाउने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । यो फोनमा टाइप सि १५ वाटको फास्ट चार्जर एवं मेगामोन्स्टर व्याट्री रहेको छ । यो फोन केवल ८.९ एमएम मोटाइको मात्र रहेको छ भने यसको कूल तौल १९१ ग्राम मात्र रहेको छ । यो सहजै हातमा लिन सकिने खालको रहेको छ ।
“Galaxy M शृंखलाले सन् २०१९ मा आफ्नो अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको छ । हालै प्रस्तुत गरिएको Galaxy M31 फोन आजका युवावर्गहरुको आवश्यकता एवं चाहना अनुरुप नै निर्माण गरिएको हो । यो फोन #Megamonster को वास्तविक रुप हो, यसमा ६४ मेगापिक्सलको क्यामरा, अभुतपूर्व ६००० mAH को व्याट्रि तथा AMOLED डिस्प्ले रहेको छ” सामसङ नेपालका मोबाइल विजिनेस प्रमुख प्रणय रत्न स्थापितले बताउनु भयो ।
Galaxy M31 फोनमा AMOLED डिस्प्ले रहेको छ, जसले गर्दा दृश्यावलोकनको जीवन्त अनुभव प्रदान गर्दछ । यो फोन Widevine L1 द्वारा प्रमाणिकृत भएको छ, जसले उच्च डिफिनिसनको विषयवस्तु स्ट्रिमिङ्गको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।
Galaxy M31 मा गेमिङ्ग तथा मुभि देखि वेभ सर्फिङ्ग तथा मल्टिटास्किङ्ग कार्यहरु विना रुकावट तथा २६ घण्टासम्म भिडियो प्ले ब्याकको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।
Galaxy M31 मा एन्ड्रोइड १० रहेकोछ यसमा सामसङको नयाँ One UI 2.0 राखिएको हुँदा कुनै रुकावट विनाको अनुभव प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मेमोरी तथा उपलब्धता
Galaxy M31 दुई मेमोरी समूहमा उपलब्ध रहेको छ । ६+१२८ GB तथा ८+१२८ GB Galaxy M31 फोन June 4, 2020 देखि नेपाल अधिराज्यभरका सामसङ ब्राण्डसप तथा रिटेल स्टोरहरुमा उपलब्ध हुने छन् ।
Galaxy M31 को ६+१२८ GB फोनको खरिद मूल्य रु. ३०,९९९ तथा ८+१२८ GB फोनको खरिद मूल्य रु. ३५,६९९ तोकिएको छ ।